Ka faa'iidaystaha waajibaadka shaqaalaynta ee shaqaalaha naafada ah (BOETH)
Waajibka Shaqaalaysiinta Shaqaalaha Naafada ah (OETH) waa hab loogu talagalay dhiirigelinta loo shaqeeyayaasha gaarka ah iyo kuwa dawliga ah inay qortaan shaqaalaha naafada ah.
Naafadaadu miyay kuu ogolaataa inaad ka faa'iidaysato waajibaadka shaqaalaynta ee shaqaalaha naafada ah (BOETH)?
Shirkaddaadu miyay ka walaacsan tahay waajibaadka shaqo ee shaqaalaha naafada ah (OETH)?
Sharaxaad dheeri ah oo ku saabsan maqaalkan.
Ma tahay shaqaale naafada ah? Yaa ka faa'iidaysan kara waajibaadka shaqaalaynta ee shaqaalaha naafada ah (BOETH)?
Waxaad ka faa'iidaysan kartaa waajibaadka shaqaalaynta ee loogu talagalay shaqaalaha naafada ah haddii aad:
loo aqoonsaday inuu yahay naafo (RQTH) ay bixiso Guddiga Xuquuqda iyo Madax-bannaanida Dadka Naafada ah; haystaha gunnada dadka waaweyn ee naafada ah (AAH); dhibbanaha shil ku dhacay shaqada ama cudur-shaqeedka oo keenaya awood la'aan joogto ah ugu yaraan 10%; qaataha lacagta hawlgabka aan ansax ahayn waa haddii ay taasi hoos u dhigayso awoodooda shaqo ama ay helaan ugu yaraan saddex meelood laba; qaataha ahaanshaha millatariga iyo hawlgabka dhibbanayaasha dagaalka; Haysta gunnada naafada ama hawlgabka la siiyo dab-demiska iskaa wax u qabso ah haddii ay dhacdo shil ama jirro lagu heshiiyey adeegga; haysta kaadhka ka mid noqoshada dhaqdhaqaaqa
Ka faa'iidaystaha waajibaadka shaqaalaynta ee shaqaalaha naafada ah (BOETH) 17-Abriil, 2022Tranquillus
horeMa dabagali karo hagaajinta shaqada ee la ii soo bandhigay shaqaale
socdaCaafimaadka shaqada: maxaa isbeddelaya laga bilaabo Maarso 31, 2022